Ch 15 Mark – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Marka / Ch 15 Mark
15:1 Ary niaraka tamin'izay raha vao maraina, araka ny mpitarika ny mpisorona niara-nihevitra sy ny loholona sy ny mpanora-dalàna sy ny filan-kevitra iray manontolo, namehy Jesosy, dia nitondra an'i Jesosy dia nanolotra Azy teo amin'i Pilato.
15:2 Ary Pilato nanontany Azy, "Hianao no Mpanjakan'ny Jiosy?"Fa ho setrin'ny, hoy izy taminy:, "Ny teninao izany."
15:3 Ary ny lohan'ny mpisorona niampanga Azy ny amin'ny zavatra maro.
15:4 Ary Pilato dia nanontany azy, nanao hoe:: "Tsy misy valiny? Jereo ny fomba tena izy ireo hiampanga anareo. "
15:5 Foana anefa i Jesosy mba hanome valiny tsy, ka dia gaga Pilato.
15:6 Ary amin'ny andro firavoravoana, dia zatra halefako ho azy ireo ny iray tamin'ireo gadra, na zovy na zovy izy ireo nangataka.
15:7 Fa nisy anankiray ilay atao hoe Barabasy, izay efa nahavita nahafaty olona tamin'ny fikomiana, izay nitanana miaraka amin'ireo ao amin'ny fikomiana.
15:8 Ary rehefa efa niakatra ny vahoaka, dia nanomboka mitalaho aminy mba hanao araka izay nataony ho azy ireo foana.
15:9 Fa Pilato namaly azy ka nanao hoe:, "Ve no tianareo halefako ho anareo ny Mpanjakan'ny Jiosy?"
15:10 Fa fantany fa noho ny fialonana fa ny mpitarika ny mpisorona ilay namadika Azy.
15:11 Ary ny lohan'ny mpisorona nampirisika ny vahoaka, ka fa Barabasy no halefan'i Pilato ho azy ireo fa tsy.
15:12 fa Pilato, mamaly indray, hoy izy taminy: "Dia inona no tianao hataoko amin'ny Mpanjakan'ny Jiosy?"
15:13 Fa ny olona niantso indray, "Homboy amin'ny hazo fijaliana Izy."
15:14 Na izany aza tena, Hoy Pilato taminy:: "Nahoana? Inona no ratsy nataony?"Fa izy rehetra niantso mafy vao mainka, "Homboy amin'ny hazo fijaliana Izy."
15:15 Ary Pilato, ta-hanome fahafaham-po ny vahoaka, nandefa an'i Barabasy ho azy ireo, ka dia natolony an'i Jesosy, rehefa nokapohiny mafy, mba hohomboana amin'ny hazo fijaliana.
15:16 Ary ny miaramila nitondra an'i Jesosy ho any amin'ny kianjan'ny anati-rova. Ary novorina ny andiana miaramila iray manontolo.
15:17 Ary dia nampitafy Azy lamba volomparasy izy. Ary platting satroka tsilo, dia napetrany taminy.
15:18 Ary Ary dia niarahaba azy: "Arahaba, Mpanjakan'ny Jiosy. "
15:19 Ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotara, ary handrora Azy. Sady nandohalika teo anatrehany, izy ireo ka hajaina azy.
15:20 Ary rehefa naneso Azy, dia nendahany ny volomparasy, Ary dia nampitafy Azy tao an-fitafiany. Ary nitondra an'i Jesosy izy, ka dia mba hohomboana amin'ny hazo fijaliana.
15:21 Ary notereny nisy mpandalo, Simona Kyreniana, izay tonga avy any ambanivohitra, ny rain'i Aleksandro sy Rofosy, mba hitondra ny hazo fijaliany.
15:22 Ka nitondra an'i Jesosy amin'ny alalan'ny ho any amin'ny tany atao hoe Golgota, izay midika hoe, 'Ny toerana tao Kalvary.'
15:23 Dia notolorany divay hosotroiny miora. Nefa tsy nanaiky izany.
15:24 Ary raha crucifying azy, dia nizara ny fitafiany, antsapaka azy, mba hahita izay ho handray izay.
15:25 Ary tamin'ny ora fahatelo no. Ary nanomboany tamin'ny hazo fijaliana.
15:26 Ary ny lohatenin'ny ny raharaha dia voasoratra ho: MPANJAKAN'NY JIOSY.
15:27 Ary ny fehiny dia nisy jiolahy roa nohomboany tamin'ny hazo fijaliana izy ireo: ny anankiray teo ankavanany, ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany.
15:28 Ary tanteraka ny Soratra Masina, izay milaza: "Ary ny iniquitous malaza izy."
15:29 Ary niteny ratsy azy ny mpandalo, nihifikifi-doha ka nanao hoe:, "Ah, ianareo izay ta-hamongotra ny tempolin'Andriamanitra, ary ao anatin'ny telo andro indray izany,
15:30 vonjeo ny tenanao amin'ny alalan'ny midina hiala amin'ny hazo fijaliana. "
15:31 Ary toy izany koa ny lohan'ny mpisorona, naneso azy ny mpanora-dalàna, dia nifampilaza: "Ny sasany novonjeny. Tsy mahavonjy ny tenany.
15:32 Aoka Kristy, ny mpanjakan'ny Isiraely, , hidina hiala amin'ny hazo fijaliana, ka mba ho hitantsika ka hinoantsika. "Ireo izay nohomboana tamin'ny hazo fijaliana koa dia niteny ratsy Azy.
15:33 Ary nony tamin'ny ora fahenina tonga, ny maizina nitranga ny tany manontolo, ka hatramin'ny ora fahasivy.
15:34 Ary tamin'ny ora fahasivy, Ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery, nanao hoe:, "Eloi, Eloi, Lamma sabacthani?" izay midika, "Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana no dia mahafoy Ahy?"
15:35 Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo, rehefa nandre izany, nanao hoe:, "Indro, miantso an'i Elia Izy. "
15:36 Ary ny anankiray tamin'ireo, mihazakazaka ary mameno ny sponjy tamin'ny vinaingitra, ary mametraka izany manodidina volotara, nomeny an'i hotsentsefin'i Jesosy, nanao hoe:: "Andraso. Aoka hoe hizahantsika na ho avy i Elia hampidina Azy. "
15:37 Avy eo Jesosy, avoakan'ny rehefa niantso tamin'ny feo mahery, expired.
15:38 Ary ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia triatra nizara roa, hatrany ambony ka hatrany ambany.
15:39 Ary ny kapiteny izay nijanona tandrifiny, nahita fa efa niala aina raha niantso toy izany, nanao hoe:: "Marina tokoa fa, io Lehilahy io Zanak 'Andriamanitra. "
15:40 Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitra eny, isan'ireny i Maria Madelenina, ary Maria, renin'i Jakoba kely sy Josefa, ary Salome,
15:41 (ary raha mbola Izy tany Galilia, dia nanaraka Azy sady nanompo azy izy) mbamin'ny vehivavy maro koa, izay niakatra niaraka taminy tany Jerosalema.
15:42 Ary rehefa hariva ny andro izao tonga (satria andro fiomanana ny andro, izay eo anatrehan'i Sabata)
15:43 dia tonga Josefa avy any Arimatia, ny mpikambana ao amin'ny filan-kevitra ambony, izay ny tenany ihany koa niandry ny fanjakan'Andriamanitra. Ary niditra tamim-pahasahiana amin'i Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy.
15:44 Fa gaga Pilato raha maty efa. Ary niantso kapiteny, dia nanontany azy raha toa izy efa maty.
15:45 Ary rehefa efa nampahafantarina ny kapiteny, dia nomeny an'i Josefa ny faty.
15:46 Ary Josefa, rehefa nividy lamba rongony fotsy madinika, ary nitondra azy nidina, nofonosiny azy ny rongony fotsy madinika ka nandevina Azy tao am-pasana, izay nolavahana avy amin'ny vatolampy. Ary rehefa nanakodia vato ho eo anoloan'ny varavaran'ny fasana.
15:47 Ary Maria Magdalena sy Maria, renin'i Josefa nahita izay nametrahany Azy.